Hakone, fitsangantsanganana avy any Tokyo | Vaovao momba ny dia
Hakone, fitsangatsanganana avy any Tokyo
Iray amin'ireo tandindon'ny Japana Tendrombohitra Fuji izany fa raha tsy eo amin'ny trano avo be ianao ary mazava ny lanitra dia tsy dia tsara loatra avy any Tokyo izany. Mba hankafizanao azy, miaraka amin'ireo tendrombohitra, ala ary farihy mahafinaritra hafa, dia mila miala amin'ny tanàna ianao.
Hakone dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra ary nanoro hevitra raha mikasika ny farihy iainana Japon. Tena akaiky an'i Tokyo izy io ary satria tena mahomby ny fitaterana eto, dia mora sy haingana izy io. Ary amin'ny fandaharam-potoana! Andao hojerentsika ary inona no azontsika atao sy jerena ao Hakone.
1 Ahoana ny fomba hahatongavana any Hakone
3 Inona no hitsidika an'i Hakone
Ahoana ny fomba hahatongavana any Hakone
Raha mpizahatany ianao ka nividy ilay Pass Rail Japan ao amin'ny firenenao dia azonao atao ny mampiasa ny tsipika JR, izany hoe ny laharam-bahoaka. Saingy amin'ny fotoana sasany dia tsy maintsy mandeha amin'ny tsipika manokana ianao ary handoa ny tsy fitovizany. Fahita any Japon izany: na dia lava be aza ny JR, indraindray tsy maintsy mandeha any amin'ny tsipika manokana ianao. Soa ihany fa tsy foana.
Miaraka amin'i JR tonga any Odawara ianao ary avy eo ianao dia afaka mampiasa lamasinina na bus tsy miankina. Tonga amin'ny shinkansen ianao avy ao amin'ny gara Tokyo na Shinagawa ao anatin'ny antsasak'adiny monja. Izy io dia tsy maintsy ny fiaran-dalamby Kodama sy Hikari sasany ka manontania any amin'ny birao rehefa manakaiky hamandrika ny tapakila (tsy ny Hikari rehetra mijanona ao Odawara) Safidy iray hafa ny mitaingina lamasinina eo an-toerana na mandeha haingana any Tokyo, an'ny zotra JR Tokaido na ny tsipika JR Shonan Shinjuku. Ny JRP dia rakotra ny zava-drehetra.
Malalaka ny tanàna ary misy tanàna kely an-tendrombohitra, ny sasany miorina amoron'ny farihy na eo amin'ny lohasaha. Ny faritra iray manontolo mampifandray azy io amin'ny tambajotram-piaran-dalamby, fiara fitateram-bahoaka, làlambe, fantsom-pifandraisana ary sambo Samy hafa ihany koa ny tolotra omeny mandalo fizahan-tany miaraka amin'ny vidiny samihafa. Ireto:
Fuji Hakone Pass: manarona fitaterana any amin'ny faritra ary koa manodidina ny Farihy Fuji Five. Telo andro izao ary misy safidy tsy maintsy ampidirina avy any Tokyo. Mitentina 5650 yen, eo amin'ny 50 $ eo.
Hakone Free Pass: roa na telo andro dia misy ny fampiasana tsy misy fetra ny lamasinina, bus, bus, fantsom-pifandraisana ary sambo rehetra any Odakyu. Ary koa, raha azo atao, ny fitaterana mandroso sy miverina mankany Tokyo. 4000 yen ny vidiny, manodidina ny 40 euro.
Pass Hakone Kamakura: Io no pas-lafo indrindra ary manome fiaran-dalamby tsy misy fetra amin'ny tambajotra Odakyu, fitaterana ao Hakone sy ny manodidina ary fidirana mankany Kamakura. 6500 yen ny vidiny.
Hakone latsaky ny 100 kilometatra miala an'i Tokyo ary toerana tsara hankafizana hot springs, mijery Lagos ary antenaina fa ny Fujisan. Malaza ny toeram-pialan-tsasatra Onsen ary fomba iray hahafinaritra azy ireo ny matory amin'ny ryokan, toeram-ponenana japoney nentim-paharazana. Misy ny vidiny rehetra ary manome toky anao aho fa mendrika izany ny traikefa.
Avy eo dia misy tanàna mafana toy ny Yumoto, akaikin'i Odawara, iray amin'ireo malaza indrindra. Misy ryokans miafina any an-tendrombohitra, ohatra, ary ny hafa eo amoron'ny farihin'i Ashi. Raha tsy mijanona amin'ny ryokan ianao dia mbola afaka mankafy fandroana lohataona amin'ny besinimaro, sokafy ho an'ny mpandeha, eo anelanelan'ny 500 sy 2000 yen. Soraty ny anaran'ireto ryokan ireto: Tenzan, Hakone Kamon, Yunosato Okada, Hakone Yuryo na Kappa Tengoku.
Inona no hitsidika an'i Hakone
I Japana dia firenena volkanika izay mariky ny tantaram-piainany ny jeografia misy azy. Hakone dia be ny mahita azy azonao atao ny misafidy ny hanao sy hahita ny zava-drehetra na mametra ny tenanao amin'ny faribolana kely kokoa. Miankina amin'ny zavatra tianao hatao sy ny fotoana anananao izany.
Ho an'ny lalan-kely Mialà amin'ny lamasinina any Odawara na Hakone-Yumoto ary mankanesa any amin'ny fiaran-dalamby Tozan izay aorian'ny 50 minitra amin'ny dia mifarana ao Gora. Eto ianao dia mandray ny funicular amin'ny gara farany, manova ny lalamby ary miafara amin'ny moron'ny Farihy Ashinoko. Azonao atao ny miampita ny farihy amin'ny sambo ary miafara amin'ny Hakone-Machi na Moto-Hakone avy any aminao dia afaka mandray ny bus ary miverina amin'ny teboka fanombohana. Ity faritra ity tsy maharitra adiny telo mahery.
Ary ny boribory lava sy feno? Mivoaka ny lamasinina any Odawara na Hakone-Yumoto ianao. Raha mivoaka amin'ny fiantsonana voalohany ianao dia afaka mahita ny Odawara Castle izay 10 minitra fotsiny ary eo amin'ny havoana. Raha tsy mandray a fiaran-dalamby, ny Tozan, mankany amin'ny gara Hakone-Yumoto, tanàna kely nefa tsara tarehy. Misy biraon'ny fizahan-tany misy mpiasa miteny anglisy izay hanome anao sarintany sy bokikely azonao atao etoana.
Mazava ho azy fa misy trano fandroana mafana ary afaka mijanona indray andro ianao. Raha tsy miverina amin'ny lamasinina ianao satria tsara tarehy ny lalana mijanona, dia miakara ilay havoana. Tonga any amin'ny Gara Miyanoshita, miaraka amin'ny onja marobe. Ity misy hotely taloha, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ahafahanao misotro na mihinana zavatra. Fiantsonana roa taty aoriana, ao amin'ny Chokokuno-Mori, manana ny tsara tarehy indrindra amin'ny Hakone sy ny Hakone Open Air Museum natokana ho an'ny sary sokitra maoderina ianao.
Raha mandeha folo minitra ianao dia tonga Gora, ny lohataona mafana Tozan. Eto ianao dia mandeha amin'ny funicular izay miakatra amoron-tendrombohitra. Ny fijanonana tsirairay dia samy manana ny azy fa mifarana kosa ny dia Souzan aiza no itondranao ny Lalamby Hakone izay mitondra anao mahitsy mankany amin'ny avo amin'ny dia dimy kilometatra. Asakasak'izay anananao Owakudani, faritra iray manodidina ny vava volkano nipoaka telo arivo taona lasa izay ary ankehitriny dia mitahiry fumaroles solifara, dobo mafana ary renirano mafana. Ary koa, amin'ny toetr'andro tsara dia azonao jerena ny Tendrombohitra Fuji.
Eto no ahafahanao mividy atody masaka mivantana ao anaty rano volkano ary mainty be izy ireo. Efa nahita an'io tamin'ny fahitalavitra ve ianao? Misy trano fisakafoanana sy fivarotana. Raha toa ianao ka mitsangatsangana kokoa ary mitondra kiraro ahazoana aina dia afaka manohy mandeha sy mahatratra ny tampon'ny Tendrombohitra Kamiyama sy ny Tendrombohitra Komagatake ianao. Eto ianao dia mandray ilay funicular indray ary midina mankany amin'ny farihin'i Ashinoko. Avelao handeha mandritra ny adiny roa miaraka amin'ny rivotra sy ny ranonorana mitete tsindraindray.
Raha tsy te-handeha be dia be ianao dia manana làlana manelanelana: mandeha antsasak'adiny mankany an-tendrombohitra Kamiyama ianao ary avy eo midina amin'ny moron'ny Farihin Ashinoko. Tsy lavitra dia lavitra ny Hakone funicular izay mifandray amin'i Owakudani. Avelao ny fitsangatsanganana adiny dimy. Owakudani dia iray amin'ireo gara an'ny Hakone funicular izay mampifandray an'i Souzan sy Togendai.
Azonao atao ihany koa sambo amin'ny farihin'i Ashinoko, farihy caldera izay ao anatin'ny karatra fujisan mahazatra Fujisan. Misy tanàna eny amoron'ny morony, tsy misy mandroso be, ary misy trano fandraisam-bahiny roa. Misy orinasa roa manana sambo fitsangantsanganana ary maharitra mihoatra ny antsasak'adiny ny fitsangantsanganana ary manodidina ny 1000 yen ny vidiny. Na ny iray amin'ireo sambo aza dia sambo piraty ary sambo iray hafa sambo steamboat Mississippi. Ny marina dia arakaraka ny fandehan'ny fotoana dia atolotra kokoa ny circuit lavitra satria ho hitanao ny zavatra rehetra ananan'i Hakone ho anao.
Noho izany, ny torohevitro dia ny hitondranao azy bebe kokoa toy ny fitsangatsanganana roa na telo andro. Mijanona eo amin'ilay faritra ianao, mandeha, miala sasatra, mivoaka alina ary miverina any Tokyo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Tokyo » Hakone, fitsangatsanganana avy any Tokyo
Tanànan'ny Algarve hitsidika an'i atsimon'i Portugal
Omano miaraka amin'ny ankizy ny drafitrao ao anaty lanezy